Bosaso Media News | Page 4
Turkiga oo Chemical iyo aashito ka helay guriga uu qunuslka sacuudiga ka degan yahay Istanbul
Saraakiisha ciidamada amniga Turkiga ayaa sheegay in ay heleen aashito iyo maadooyin kale oo chemical ah oo lagu baabi’iyay meydka wariyihii la dilay ee sacuudiga ee Jamal Khashoggi. Arintaan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay saraakiil ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha ...
COLAADDII DHUMMAY OO HESHIIS HORU-DHAC AH LAGA GAARAY
Ergo-dhaqameed ka badan 40 xubnood oo mudda15 maalmood ah ku hawllanaa nabadeynta beelo ku dagaallamay degaanka Dhummay ee koonfurta gobolka Sool ayaa qodoba horu’dhac ah ka soo saaray heshiisiinta beelahaasi. Ergada nabadeynta oo ka kala yimid magaalooyinka Garoowe Laascaanood,Buuhoodle,Gaalkacyo iyo ...
Shirkii golaha wasiirada dowladda Puntland ee Khamiista maanta ah ayaa warbixin looga dhegaystay guddiga u kuur-gelaya nabadeynta beelo ku dagaallamay degaanno kamid ah Puntland,gaar ahaanna tuulada Dhummay ee koonfurta gobolka Sool. Guddigaan oo uu todobaadkii hore magacaabay madaxweyne Cabdiweli Gaas ...
Askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa xalay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ku dilay allah u naxariistee Safiya Cabdiraxmaan oo ahayd gabar macallimad ka ah iskuul ku yaalla magaalada. Dadka deegaanku waxay sheegeen in dilkeeda uu yimid markii uu ...
Trump oo soo dhaweeyay “guusha” uu xisbigiisa ka gaaray doorashada
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay guusha xisbigiisa oo ka soo hooyay doorashada xilliga dhexe, gaar ahaan aqalka sare. Trump ayaa bartisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in xisbigiisu uu gaaray guul wanaagsan, waxa uuna dadka dalkaasi ...
Ilhaan Cumar oo ah gabar soomaaliyeed ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay oo ka tirsan dadka qaxootinimada ku tahay Mareykanka ee ka mid noqda Koongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar oo 36 sano jir ah ayaa taariikh sameysay ka dib markii ay noqotay ...
MIDOWGA YURUB OO BEENIYAY IN JOOJIYEEN MASHRUUCA DAYAC-TIRKA WADADA GAROOWE IYO GAALKACYO
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Isniinta maanta ah oo ku beegan 05 November 2018, qasriga Madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku qaabilay wefti uu hogaaminayo safiirka midowga yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. Fulgencio Guiz Garido. Madaxweynaha ...
GIDG DOWLAD GOBOLEEDYADA OO DHISANAYA CIIDAMO GAAR AH
Wasiirada Amniga Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada ayaa maanta shir uga furmayaa magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah Jubaland. Golaha ayaa ka kooban Dowlad Goboleedyada kala ah; Puntland,Jubaland,Koonfur Galbeed iyo Galmudug,waxaana ay shirkan kaga arrinsanayan dhismaha ciidamo isku’dhaf ah oo u ...
Wefdi heer sare ah oo ka socda dowladda Turkiga ayaa saaka booqasho ku imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wefdiga oo uu hoggaaminayo wasiirka Difaaca dowladda Turkiga waxaa kamid ah Taliyaha Ciidamada Xoogga dalkaasi Turkiya ,Saraakiil sare iyo madaxa Hay’adda ...
Xisbiga Dimuquraadiga Maraykanka ayaa la wareegay Aqlabiyada Golaha Shacabka Maraykanka (House of Representatives), halka xisbi Trump uu weli heysto Aqlabiyada Aqalka Sare ee Senate-ka. Codbixintii shalay ka dhacday dalka Maraykanka ayaa ahayd loolankii ugu adkaa ee golayaasha dalkaasi tan ...